Azo vidiana izao ny Huawei Watch | Androidsis
Manuel Ramirez | | Huawei, IFA, SmartWatch
Miaraka amin'ny sehatra tena tanora tokoa Tahaka ny Android Wear tenany ihany, isam-bolana dia miditra amin'ireo fanampim-panazavana vaovao izay manantena ny hitondra ny tsara indrindra amin'ity rafitra fiasa novaina ity izahay mba hanandramana hanangona cajole, mihamaro hatrany ireo mpampiasa vaovao mahita azy io ho toy ny mety hanana fitaovana amin'ny azy ireo. tanana mba hizaha ny fampandrenesan'ny findainao.
Ny Huawei Watch vaovao dia nambara omaly avy amin'ny IFA ary afaka miteny isika fa miatrika ny iray amin'ireo rindrambaiko mahay mamolavola tsara indrindra eo amin'ny tsena ankehitriny. ny smartwatch amin'ny vidiny 399 € amin'ny maodelim-pototra misy azy ary misy takelaka boribory 1,4 mirefy AMOLED, na dia tsy mandalo io vy bezel io aza izy izay hita ao amin'ny LG's Watch Urbane sy Motoola an'ny Motorola.
1 Fijery tsy mitovy amin'ny hafa
2 Kristaly safira
2.1 Ny fanondroana teknika
Fijery tsy mitovy amin'ny hafa
Saika io iray io ihany dia mety hamaritra hoe iza izy ireo ireo fahatsapana ho hitan'ny mpampiasa rehefa tazominao voalohany amin'ny tananao na eo amin'ny tananao io smartwatch io.
Miaraka amin'ny vahaolana amin'ny pixel 400 x 400 dia hamela antsika hankafy ireo tarehy ireo ihany koa izy ireo hahafahany miditra amin'ny karazana widgets rehetra hanangonana karazana fampahalalana rehetra. Izany dia nilaza fa ny traikefa an-tsary no kalitao lehibe indrindra an'ity akanjo ity, andao ary, inona tena tsara.
Tonga tamin'ny fomba telo ny vatana, iray amin'ny vy vy, mainty sy volamena. Ny maodely vy tsy misy fangarony no voalohany, noho izany dia azo atao amin'ny fehin-kibo io. Ity maodely fototra ity, ny klasika dia ho an'ny 399 €, raha ny maodely misy fehin-kofehy metaly 449 €.
Amin'ity voalaza ity dia manana dikanteny telo tena hafa isika: modely kilasika, mavitrika ary sangany. Ny fahasamihafana amin'ny vidiny dia mitranga ao amin'ny Active ho an'ny € 449 ary € 699 amin'ny Elite.
Ny tontonana dia safira kristaly izay tokony ho omeo ny stamina rehetra io mahazaka karazam-bika rehetra. Ary raha ampiantsika amin'ity vatana metaly ity dia manitatra ny fiarovana atolotry ny mpampiasa azy hiatrika tena mahazaka azy.
Huawei Watch izay manisa miaraka amin'ny charger tsy misy tariby ary ao anatin'ireo fepetra arahana ara-teknika azy dia manana puce Snapdragon 400, RAM 512 MB ary tahiry anatiny 4 GB, izay ampianay bateria 300 mAh.
Tontonana AMOLED 1,4 mirefy
42 milimetatra ny savaivony
11,3 mm ny hateviny
Fanapahan-kevitra 400 x 400 286 ppi
Kristaly safira amin'ny tontonana
Vatan'ny vy tsy miova 316L
1.2 GHz Qualcomm Snapdragon 400 puce
4GB fitehirizana anatiny
Bluetooth 4.1, Wi-Fi, gyroscope, accelerometer, sensor amin'ny tahan'ny fo, barometre ary mikrô
Huawei Watch izay manana bateria izay mahatratra roa andro amin'ny fampiasana tsy tapaka araka ny nambaran'i Huawei mihitsy, koa tokony hino azy ireo isika. Izany dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo olana goavana amin'ireo fitaovana ireo ary izany dia mitarika mpampiasa sasany amin'ny farany hamela azy ireo hitahiry ao anaty vatasarihana latabatra, satria ny roa isaky ny telo manala azy mba hampiditra azy io dia manelingelina.
avy amin'ny misy androany ho an'ny fividiananao smarwatch vaovao izay tonga miaraka ny Huawei Mate S, ny sainam-bolan'ny orinasa vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Hihaona amin'ny Huawei Watch, famantaranandro maranitra 399 €
Ity dia ampahany amin'ny smartwatch, fa ny sembana ananany no vidiny
Izy io no sembana fa ny tena izy dia famantaranandro tsara sy mijery be izy io